Blasphemy or Sacrilege on Insulting the Sanctity of Buddhism
Lessons From Furry Friends On World Animal Day
Racist Eleven Media Group should be charge at ICC
Raids On Genneva Gold
VOA : နယ်စပ်ရေးရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေး-”ရခိုင်ပြည်နယ်ကို တစ်ဖက်နိုင်ငံက လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ ဝင်ရောက်လာတာ လုံးဝ မဟုတ်”
Pakatan's Comprehensive labour policy reforms aim to uplift the nation
The BN Youth Chief clearly needs some lessons macro-economics. While Barisan Nasional Youth can tolerate corruption and wastages to the tune of billions but it isacrime from the BN Youth Chief's point of view when Pakatan tries to improve workers' share of national income so that they liveadignified life and contribute to domestic economy as consumers.
Perhaps it isasign of the time that even Barisan Nasional MPs spend more time talking about Pakatan Rakyat's Belanjawan 2013 than Prime Minister Najib Razak's budget proposals.
The latest is Barisan Nasional Youth's accusation that Pakatann Rakyat's offering ofaminimum wage at RM1,100 will bankrupt companies and ruin the economy. The BN/UMNO Youth Chief called Pakatan's minimum wage promise "not realistic" and "brainless populism".
Pakatan Rakyat made its commitment to implementaRM1,100 (total compensation) minimum wage in its 2012 Belanjawan in October 2011, ahead of Prime Minister Najib Razak's announcement on 30th April 2012.
2) Already in Malaysia workers' share of national income is only 28% while in most developed countries workers share between 40%-55% of national income. There is clearly room to improve the workers' share of national income.
Why BN's minimum wage is inadequate?
While Pakatan Rakyat welcomed the long overdue announcement ofaminimum wage rate at RM900 for Peninsula Malaysia and RM800 for Sabah and Sarawak by Prime Minister Dato' Seri Najib Razak in May 2012, Pakatan Rakyat had warned then that the effective rate amounts to no change in reality and the policy is implemented inapiecemeal manner.
BN's minimum wage amounts to very little in reality. The most important finding that eventually convinced the Najib administration to implement the minimum wage policy wasaHuman Resources Ministry study that foundathird of the workers were living withawage of about RM700, below the poverty line.
a)aclear and determined policy to stop dependence on foreign unskilled labour which results ina"race to the bottom" in terms of wage;
A final note, we would like Khairy Jamaluddin to join us to demand the Government to declassify the Confidential Report by the World Bank entitled "Optimal Deisgn foraMinimum Wage Policy in Malaysia" dated 28th July 2011.
"Tetapi sekiranya kita jumlahkan dengan 'hutang tersembunyi' di dalam bentuk 'contingent liability' kita sudah pun melebihi 65 peratus KDNK," katanya.
"80. Apart from the transition from bulk subsidies to targeted subsidies,areview of Malaysia's taxation system will be continued to ensure the taxation system better reflects the household's financial position. The transition from income based taxation system toamore comprehensive and fair taxation system will eventually benefit the rakyat.
82. Implementation of the new tax tructure isanational imperative to ensure the Government's finances remain strong for future generation. The Government will not shrink from taking right action although it is challenging.
83. However, the Government will give the sufficient time to all parties to make the necessary adjustment. Public acceptance of this new initiative will be solicited through information programmes, education and extensive consultations."
The Prime Minister's budget speech clearly contradicts those in his cabinet.
Just last April, when queried in parliament on the link between GST and TUKAR (Small Retailer Transformation Programme) the Deputy Minister of Domestic Trade, Co-operative and Consumerism blatantly issuedadenial, stating " TUKAR program has nothing to do with GST."
This is despite the Ministry's website stating the following objectives for TUKAR -an EPP that aims to modernise traditional retail stores under the flagship National Key Economic Areas (NKEA):
Posted: 04 Oct 2012 10:00 AM PDT
Posted: 04 Oct 2012 06:42 AM PDT
Today, my 75-year-old grandpa who has been blind from cataracts for almost 15 years said to me, "Your grandma is just the most beautiful thing, isn't she?" I paused forasecond and said, "Yes she is. I bet you miss seeing that beauty onadaily basis." "Sweety," my grandpa said, "I still see her beauty every day. In fact, I see it more now than I used to when we were young." MMT
Today, I walked my daughter down the aisle. Ten years ago I pulleda14 year old boy out of his mom's fire-engulfed SUV afteraserious accident. Doctors initially said he would never walk again. My daughter came with me several times to visit him at the hospital. Then she started going on her own. Today, seeing him defy the odds and smile widely, standing on his own two feet at the altar as he placedaring on my daughter's finger MMT.
Today, I walked up to the door of my office (I'maflorist) at 7AM to findauniformed Army soldier standing out front waiting. He was on his way to the airport to go to Afghanistan forayear. He said, "I usually bring homeabouquet of flowers for my wife every Friday and I don't want to let her down when I'm away." He then placed an order for 52 Friday afternoon deliveries of flowers to his wife's office and asked me to schedule one for each week until he returns. I gave hima50% discount because it made my day to see something so sweet. MMT
Today, I told my 18 year old grandson that nobody asked me to prom when I was in high school, so I didn't attend. He showed up at my house this evening dressed inatuxedo and took me as his date to his prom. MMT
Today, I operated onalittle girl. She needed O- blood. We didn't have any, but her twin brother has O- blood. I explained to him that it wasamatter of life and death. He sat quietly foramoment, and then said goodbye to his parents. I didn't think anything of it until after we took his blood and he asked, "So when will I die?" He thought he was giving his life for hers. Thankfully, they'll both be fine. MMT
Today, my dad is the best dad I could ask for. He'saloving husband to my mom (always making her laugh), he's been to every one of my soccer games since I was5(I'm 17 now), and he provides for our family asaconstruction foreman. This morning when I was searching through my dad's toolbox forapliers, I foundadirty folded up paper at the bottom. It was an old journal entry in my dad's handwriting dated exactly one month before the day I was born. It reads, "I am eighteen years old, an alcoholic who is failing out of college,apast cutter, andachild abuse victim withacriminal record of auto theft. And next month, 'teen father' will be added to the list. But I swear I will make things right for my little girl. I will be the dad I never had." And I don't know how he did it, but he did it. MMT
Today, my 8-year-old son hugged me and said, "You are the best mom in the whole entire world!" I smiled and sarcastically replied, "How do you know that? You haven't met every mom in the whole entire world." My son squeezed me tighter and said, "Yes I have. You are my world." MMT
Today, I have an elderly patient who is suffering fromasevere case of Alzheimer's. He can rarely remember his own name, and he often forgets where he is and what he said justafew minutes beforehand. But by the stretch of some miracle (perhaps the miracle of love), he remembers who is wife is every morning when she shows up to spendafew hours with him. He usually greets her by saying, "Hello my beautiful Kate." MMT
Today, my 21 year old Labrador can barely stand up, can't see, can't hear, and doesn't have enough strength to bark. But it doesn't stop her from wagging her tailamileaminute every single time I walk into the room. MMT
Today is our 10th anniversary, but since my husband and I are both recently unemployed we agreed not to get each other any gifts. When I woke up this morning, my husband was already up. I walked downstairs to find beautiful wild flowers brilliantly arranged all over the house. There must be 400 flowers total and he didn't spendadime. MMT
Today, my high school boyfriend, who I thought I'd never see again, showed me the pictures of the two of us he kept in his Army helmet while he was overseas for the last 8 years. MMT
Today, my 88-year-old grandmother and her 17 year old cat are both blind. My grandmother's guide dog leads my grandmother around the house, which is normal. But lately, he's been guiding her cat around the house too. When her cat meows, he walks up and rubs against her, and then she follows directly behind him to her food, to the litter box, to the other end of the house foranap, etc. MMT
Today, my older brother has donated bone marrow 16 times to help treat my cancer. He communicates directly with my doctor and does it without me even asking or knowing when he has an appointment. And today my doctor informed me that the treatment appears to be working. "Cancer cells have been drastically reduced in the last few months." MMT
Today, I was driving home with my grandfather when he suddenly madeau-turn and said, "I forgot to get your grandmotherabouquet of flowers. I'll pick up one from the florist at the corner down here. It'll only takeasecond." "What's so special about today that you have to buy her flowers?" I asked. "There's nothing specifically special about today," my grandfather said. "Every day is special. Your grandmother loves flowers. They putasmile on her face." MMT
Today, I re-read the suicide letter I wrote on the afternoon of September 2nd 1996 about two minutes before my girlfriend showed up at my door and told me, "I'm pregnant." Suddenly I felt I hadareason to live. Today she's my wife. We've been happily married for 14 years. And my daughter, who is almost 15 now, has two younger brothers. I re-read my suicide letter from time to time asareminder to be thankful – I am thankful I gotasecond chance at life and love. MMT
Today, and every day for the last two months since I returned to school with burn scars on my face after being hospitalized for nearlyamonth for injuries I sustained inahouse fire,ared rose was taped to my locker when I got to school in the morning. I have no clue who is getting to school early and leaving me these roses. I've even arrived early myselfafew times to try to figure it out, but each time the rose was already there. MMT
Today was the 10 year anniversary of my dad's passing. When I wasakid he used to humashort melody to me as I was going to sleep. When I was 18, as he rested in his hospital bed fighting cancer, the roles were reversed and I hummed the melody to him. I haven't heard that melody since, until last night. My fiancé and I were turned on our sides looking at each other in bed when he started humming it to me. His mom used to hum it to him when he wasakid. MMT
Today, due to Alzheimer's and dementia, my grandfather usually can't remember who my grandmother is when he wakes up in the morning. It bothered my grandmotherayear ago when it first happened, but now she's fully supportive of his condition. In fact, she playsagame every day in which she tries to get my grandfather to ask her to re-marry him before dinnertime. She hasn't failed yet. MMT
Today, I am the proud mom ofablind 17-year-old boy. Although my son was born without his sense of sight, it hasn't stopped him from beingastraight A student,aguitarist (whose band just surpassed 25,000 downloads of their first album), andaloving boyfriend to his long-term girlfriend, Valerie. Just today, his younger sister asked him what he likes about Valerie, and he said, "Everything. She's beautiful." MMT
Today, I waited on an elderly couple. The way they looked at each other… you could see they were in love. When the husband mentioned that they were celebrating their anniversary, I smiled and said, "Let me guess. You two have been together forever." They laughed and the wife said, "Actually, no, today is our5year anniversary. We both outlived our spouses and then life blessed us with one more shot at love." MMT
Today, my father found my little sister alive, chained up inabarn. She was abducted near Mexico City almost5months ago. Authorities stopped actively searching for herafew weeks later. My mom and I laid her soul to rest. We hadafuneral for her last month. All of our family and friends attended the ceremony except my father. Instead he kept looking for her. He said he "loved her too much to give up." And she's back home now because he never did. MMT
Today, there are two senior boys at my school who have an openly gay relationship. They have experienced verbal humiliation onadaily basis for the last two years, yet they continue to hold each other's hand in the hallways. Despite threats and vandalized lockers, they showed up to prom this evening wearing matching tuxedos. Seeing them on the dance floor, smiling from ear to ear in spite of all the haters MMT.
Today, my sister and I were inabad car accident. My sister is Mrs. Popular at school – she knows everyone. I'mabit of an introvert – I hang-out with the same2girls all the time. My sister immediately postedacomment on Facebook about our accident. And while all her friends were commenting, my2friends showed up independently at the scene of the accident before the paramedics arrived. MMT
Today, my fiancé returned home from his last tour of duty overseas. Yesterday he was just my boyfriend, or so I thought. Almostayear ago, he mailed meapackage. He told me I wasn't allowed to open it until he got home in two weeks. But then his tour got extended for another 11 months. Today, when he got home, he told me to open the package, and just as I pulled the ring out of the box, he got down on one knee. MMT
Today, my 12-year-old son, Sean, and I stopped by the nursing home together for the first time in several months. Usually I come alone see my mother who's suffering from Alzheimer's. When we walked into the lobby, the nurse said, "Hi, Sean!" and then buzzed us in. "How does she know your name?" I asked. "Oh, I swing by here on my walk home from school all the time to say hi to Grandma," Sean said. I had no idea. MMT
Today, I found an old hand written note my mom wrote when she wasasenior in high school. On it isalist of qualities she hoped she would someday find inaboyfriend. The list is basically an exact description of my dad, who she didn't meet until she was 27. MMT
Today, I've been chemistry lab partners with one of the most beautiful (and popular) girls at our school since the beginning of the school year. And although I never would have had the courage to talk to her otherwise, she's totally down to earth and sweet. We spend our time in the lab chatting, laughing, and getting A's (she's smart too), and just recently we started talkingalittle bit outside of class too. Last week when I heard that she didn't haveadate to our homecoming dance, I desperately wanted to ask her, but chickened out every time I was about to. Then this afternoon, at lunchtime, she ran up to me and formally asked me to ask her to the dance. So I did, and she kissed me on the cheek and said, "Yes!" MMT
Today, on our 10th anniversary, she handed measuicide note she wrote when she was 22, on the exact day we met. And she said, "For all these years I didn't want you to know how foolish and unstable I was back when we met. But even though you didn't know, you saved me. Thank you." MMT
Today, my grandpa keeps and old, candid photo on his nightstand of my grandma and him laughing together at some party in the 1960's. My grandma passed away from cancer in 1999 when I was 7. This evening when I was at his house, my grandpa caught me staring at the photo. He walked up, hugged me from behind and said, "Remember, just because something doesn't last forever, doesn't mean it wasn't worth your while." MMT
Today, I sat down with my two daughters, ages4and 6, to explain to them that we have to move out of our4bedroom house and intoa2 bedroom apartment for awhile until I can find another job that pays well. My daughters looked at each other foramoment and then my youngest daughter turned to me and asked, "Are we all moving into the apartment together?" "Yes," I replied. "Oh, so no big deal then," she said. MMT
Today, I met the prettiest woman onaplane. Assuming I wouldn't see her again after we made our connections, I told her how pretty I thought she was. She gave me the most sincere smile and said, "Nobody has said that to me in 10 years." It turns out we're both in our mid-30's, never married, no kids, and we live about5miles away from each other. We haveadate set for next Saturday after we return home. MMT
Today, I'mamother of2andagrandmother of 4. At 17 I got pregnant with twins. When my boyfriend and friends found out I wasn't going to abort them, they turnedacold shoulder to me. But I pressed forward, worked full-time while attending school, graduated high school and college, and metaguy in one of my classes who has loved my children like his own for the last 50 years. MMT
Today, on my 29th birthday, I returned home from my 4th and final tour of duty overseas. The little girl who lives next door to my parents (who isn't so little any more - she's 22 now) met me at the airport withalong stemmed rose,abottle of my favorite vodka, and then asked me out onadate. MMT
Today, my daughter accepted her boyfriend's marriage proposal. He is3years older than her. They started dating when she was 14 and he was 17. I never liked the age difference when they were kids. When he turned 18aweek before she turned 15, my husband insisted they break-up. They maintainedafriendship, but went on to date other people. Now at the ages of 24 and 27, I've never seen two people more in love. MMT
Posted: 04 Oct 2012 06:24 AM PDT
The following prayer was found amongst the personal belongings ofaprisoner who died inaconcentration camp:
And on the Day of Judgement, do not remember only the acts of cruelty, inhumanity and violence that they carried out...
This prayer reminds us that we should fight evil with goodness and prayers. No matter how justified, the use of force and violence isawin for the other side.
At the same time, it makes me wonder howahuman be so forgiving especially under those circumstances. In fact, in today's patient and self-indulgent society, it seems likeamyth.
Nonetheless, it is up to each one of us to make this worldabetter place.
*Have been very busy today. My apologies for this delayed posting.
See….Fake Monks from MI are used by Kyant Phut to assault DASSK. So WHO IS INSULTING, MISUSING or Committing Blasphemy or Sacrilege on Insulting the Sanctity of Buddhism the BUDDHISM?
Copied from the FB Myo Myint Aung's status.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ဒီပဲယင်းအစစ်ခံထွက်ဆိုချက်များ။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို ရောက်နေသည့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ယေး တက္ကသိုလ်မှာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအကြောင်း ယမန်နေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့က ဟောပြောခဲ့ ပါတယ်။
ဒီဟောပြောမှုထဲမှာ ဒီပဲယင်း ဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော်တော် ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ သမိုင်းမှတ်တမ်းတ ခု ဖြစ်နေမှာမို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
"ကျမကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ အဖြစ်အပျက်ကတော့ ဒီပဲယင်း အရေးအခင်းပေါ့လေ။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ကပါ။ အထက်မြန်မာပြည်စည်းရုံးရေး ခရီးသွားနေတုန်းက အဖြစ်အပျက်လေး တစ်ခုပါ။ ပြည်သူတွေက စိတ်ဝင် တစား အားပေးမှုတော့ ကျမတို့ ပါတီလည်း ကြီးမားလာခဲ့တာပါ။ အချိန်က ညနေပိုင်းရောက်နေပြီ။ ခရီး သွားနေရင်းဆိုတော့ တနေရာကနေတနေရာသွားနေရတာ။
အဲဒီမှာ ကျွန်မတို့ ကားတန်းကို ဘုန်းကြီး တပါးက တားတယ်။ တားပြီး မိန့်ခွန်း ပြောခိုင်းတယ်။ အချိန် က နောက်ကျနေပြီဆိုတော့ ကျမ က ငြင်းတယ်။ ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ မိန့်ခွန်းပြောဘို့ စီစဉ်ထားတာလဲ မရှိ တာကြောင့် ကျမတို့ ခရီးဆက်ရဦးမှာလဲ ရှိနေသေးလို့ ပါလို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ် မရပါဘူး။ နောက်ထပ် ဘုန်းကြီးတွေ ဝိုင်းလာတယ်။ ဆက်သွားလို့ မရအောင်တားထားတယ်။ အဲဒီနောက် လူအုပ်စု တဖွဲ့ ကရပ်ထားတဲ့ ကားတွေနောက်ကနေ ပြေးလာပြီး ကျမတို့ လူတွေကို ရိုက်နှက်ကြတယ်။ နောက်ကျောဖက်ကနေပေါ့။
ဒါဟာ ကျမရဲ့ ဒီပဲယင်း အရေးပေါ့။ ဘုန်းကြီးတွေလို့ သာပြောတာ လက်မောင်းမှာလဲ ဆင်တူ လက်ပတ် အဖြူတွေ ပတ်ထားတယ်။ အဖွဲ့ ကတော်တော်ကိုကြီးတဲ့အဖွဲ့ ပါ။ သူတို့ ဝိုင်းရိုက်တာ လူလေးယောက် ပွဲချင်းပြီး သေသွားတယ်။ ကျမကားရဲ့ လေကာမှန်တွေ ကိုလဲ ရိုက်ခွဲကြသေးတယ်။
ကျမရဲ့ ကားမောင်းသမားလေး က အတော်လေးကိုတော်တာပါ။ ကားကို ဆက်မောင်းလို့လဲမ ရ
တော့ နောက်က ကားတွေကိုစောင့်ရင်းနဲ့ ပေါ့။ အဲဒါနဲ့ကျမရဲ့ကားကို မောင်းတဲ့ သူက ရှေ့မှာ တားထား တဲ့ အတားအဆီးတွေကို ဖြတ်မောင်းလိုက်မယ်လို့ ပြောလာတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျမတို့ရဲ့ တခြားအဖွဲ့ တွေကို အဲဒီ ကနေတားဆီး ထားတာမို့လို့ဘဲတဲ့။ အဲလို ဖြတ်မောင်းလိုက်ရင် ကျမတို့ အဖွဲ့ တွေ နဲ့ ဆုံမှာ ဘဲမို့ပါ။
ကျနော် အတားအစီး တွေဖြတ်မောင်း လိုက်ရမလားတဲ့… မောင်းပေါ့ (ရီသံများ) ဟုတ်တယ်လေ ကျမ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ကျမမှာ စိတ်ကလဲလှုပ်ရှားစရာ ကားထဲထိုင်ပီး အဲဒီ ပိတ်ထားတာကြီးကို အတင်းဖြတ်ပြီး မောင်းတာ တသက်နဲ့ တကိုယ်တခါမှလဲ မလုပ်ဖူးဘူး။ အတားအစီးတွေ ကို
ဖြတ်မောင်းပေမယ်လည်း ဟိုဘက်မှာကဘယ်သူမှမရှိကြဘူးလေ။ လမ်းပိတ်ထားတာ သက်သက်ပေါ့ ။ ဒီလို့နဲ့ မောင်းလို့ ရသလောက်မောင်းလာတာ။ နေက်ထပ် မြို့ဝင်ဂိတ်ရောက်တော့ အဖမ်းခံရတာပဲ။
ကျမတို့ အနေနဲ့ လက်သီးလက်မောင်းလေးတောင်မထောင်ခဲ့ ပါဘဲနဲ့ ကိုယ့်ကို လာရိုက်လို့ထွက်ပြေး ရတာကို အဖျက်သမားတွေလို့ စွပ်စွဲတာနဲ့ အဖမ်းခံရပြီး အကျယ်ချုပ် ၆ နှစ် ပြစ်ဒဏ်ချတယ်။ နောက်တော့ အမေရိကန် တယောက် ရေကူးပြီး လာတွေ့လို့ ၁ နှစ် ထပ်တိုးပြီး ၇ နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။ အမေရိကားက လူတွေကိုယ်စား လာပြီးနုတ်ခွန်းဆက်တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Posted: 04 Oct 2012 04:58 AM PDT
Posted: 04 Oct 2012 03:29 AM PDT
The public places that I go to nowadays are so few that I can count them with just the fingers of both hands. As I write this, I am reminded of the story of the circus elephants. Asababy, one of their legs are chained to stakes. They could only walk as far as the length of the short chains allowed. So they would walk round and round the stakes. In their adulthood, even with the chains removed, they would not stray beyond that radius.
Monster Blog – February 12, 2006: Sympathy or Opportunity – Media's Portrayal of Disabled Persons
Posted: 04 Oct 2012 12:41 AM PDT
On World Animal Day today, let us celebrate the immense contributions of animals towards man and society.
is World Animal Day. It's that special occasion to pause foramoment
and reflect on the immense contribution of animals to mankind as well as
the need to respect, cherish and
Posted: 04 Oct 2012 12:39 AM PDT
I agree with the FB comment of my friends>>>
I AM SHARING THIS AGAIN BECAUSE BURMA MEDIA TAKEN MORE THAN THOUSAND OF INNOCENT ROHINGYA MUSLIM PEOPLE LIVES.
John Baptiste Eleven Media is owned by religious zealots Rakhines. Also President Office so called director Khwe Zaw (sri) Hmu Zaw is involved. They are spreading rumors and false news to create hatred against Muslims benefitting sales of their rubbish, substandard news paper. Their days are numbered!
Posted: 04 Oct 2012 02:07 AM PDT
"Tidak logik untuk sebuah negeri mempunyai 200,000 pengundi yang tak berdaftar, itu yang kita risaukan sekarang, tapi kita akan terus memantau usaha terdesak itu," katanya kepada Keadilan Daily mengulas laporan bahawa Umno Kedah kini berusaha mendaftarkan kira-kira 200,000 yang layak mengundi di negeri itu.
"Ia kononnya untuk menimbulkan keyakinan kepada rakyat Kedah bahawa mereka mampu mentadbir semula negeri itu, tetapi saya tahu, rakyat Kedah kini bijak menilai," kata Zakaria.
"Mereka bukan sahaja terdesak merampas semula Selangor, malah Kedah juga," tambah beliau.
The raids took place on 2nd October, 2012 in KL and Singapore.
Posted: 03 Oct 2012 11:35 PM PDT
VOA > နယ်စပ်ရေးရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေး-"ရခိုင်ပြည်နယ်ကို တစ်ဖက်နိုင်ငံက လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ ဝင်ရောက်လာတာ လုံးဝ မဟုတ်"
If that is TRUE, Hmuu Zaw should be removed from office and banned from using Internet because he had started the FALSE news to startaHATRED on ARMED ILLEGAL INVADER Bengalis or Rohingya. He FORCED the whole country including ALL the Muslims to support them because if do not support…could be labled as traitor. He fanned the BLIND Ultra-Nationalism in the whole country: even Daw Suu, NLD and 88 generation had to toe the line.
ဒီတပတ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာ ဆွေးနွေးခန်းမှာ နယ်ခြားဒေသကို အဓိကတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်နေတဲ့ နယ်စပ်ရေးရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေး ကို ဗွီအိုအေမြန်မာသတင်း ဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်း က သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  နယ်စပ်ဒေသတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှ နယ်မြေဒေသတွေ ပိုပြီးလုံခြုံမယ်လို့ နယ်စပ်ရေးရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေး က ပြောကြားပါတယ်။ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်နဲ့အတူ နယူးရော့ခ်မြို့ ကို ခေတ္တရောက်ရှိနေတဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေးရဲ့  ပြောကြားချက်တွေကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာကဏ္ဍအဖြင့် နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ ဗွီအိုအေ ကို အခုလို သီးသန့်တွေ့ဆုံခွင့် ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဝန်ကြီးရဲ့  အဓိကတာဝန်က နယ်ခြားဆိုင်ရာကိစ္စတွေဆိုတော့ ကျနော် နယ်ခြားဖက်ဆိုင်ရာတွေနဲ့ပဲ ပတ်သက်လို့ ပထမဦးဆုံး မေးပါရစေ။ အထူးသဖြင့် ကျနော်တို့ရဲ့  အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့  နယ်ခြားဖက်တွေကို ကျနော့်အနေနဲ့ တော်တော်လေးရောက်ခဲ့တော့ ထိုင်းနိုင်ငံဖက်မှာဆို နယ်ခြားဒေသတွေမှာဆိုရင် လမ်းတွေဖောက်ပြီးတော့ လုံခြုံရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေတွေ တိုးတက်လာအောင် မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ထားနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခု ဒီအစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ ဒီလို အခြေအနေမျိုးတွေအထိ လိုက်မီလာအောင် ဝန်ကြီးတို့အနေနဲ့ ဘာတွေများ စီမံချက်တွေ ရှိနေပါသလဲ။ဦးသိန်းဌေး ။ ။ နယ်စပ်ဒေသတခု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှပဲ ဒီနယ်မြေဒေသ လုံခြုံတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကိုလည်း ကျနော်တို့ လက်ခံထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ တကယ်တမ်းကျတော့ နယ်စပ်ဒေသတွေကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုတာ လူကိုလူနဲ့ပဲ ကာရတယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒေသမှာ မိမိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေ နေထိုင်မယ်။ ဒီ ဒေသမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်ဆိုရင် မိမိနယ်နမိတ်ကို အကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးထားတဲ့ နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့လည်း နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အစီအမံတွေ ချမှတ်ပြီး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အပိုင်း (၂) ပိုင်း ရှိပါတယ်။ အပိုင်း (၁) ကတော့ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အဲဒါ စောစောက ကျနော်တို့ပြောတဲ့ လမ်းပန်းကိစ္စတွေ၊ ရေမီးကိစ္စတွေပေါ့။
ဦးသိန်းဌေး ။ ။ လမ်းကိစ္စ၊ မီးကိစ္စ၊ ဆက်သွယ်ရေးကိစ္စ၊ ရေကိစ္စ၊ လူတွေ နေနိုင်ထိုင်နိုင်အောင် အဓိကတော့ လူမှုစီးပွားဘဝတွေ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆိုရင် နောက်တခါ ဒီထက် အဆင့်မြင့်ပြီး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဒီလို အခြေခံ အဆောက်အအုံတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှလည်း လူတွေက မိမိတို့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယပိုင်းကတော့ နည်းနည်းပိုပြီးတော့ မြင့်တာပေါ့။ ဒါကတော့ socioeconomic development ပြည်သူတွေရဲ့  လူထုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။ ဒီဟာအတွက်တော့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း၊ နောက်တခါ စီးပွားရှာဖွေနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း။ အဲဒီတော့ နယ်စပ်ဒေသရဲ့  သဘာဝကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် စီးပွားရှာဖွေနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းကို ရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင် မိမိရဲ့  အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ ကူးလူးဆက်ဆံမှုရှိမှပဲ သူတို့အနေနဲ့ စီးပွားရှာဖွေနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ တဖက်မှာလည်း မိမိတို့ရဲ့  ပြည်တွင်းနဲ့ ကူးလူးဆက်ဆံမှု လမ်းကြောင်းတွေ ကောင်းမှသာလျှင် ပေါင်းကူးသဖွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထား ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တခါ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူတွေ ပြည်သူလူထုတွေ နေထိုင်လာပြီဖြစ်တဲ့အခါကြရင် ပြည်သူလူထုတွေရဲ့  အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ရှာဖွေပေးဖို့အချက်ကလည်း အဓိက ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖက်ခေတ်မှာ ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြတော့ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတခုတည်းကတော့ တိုးပွားလာတဲ့ လူဦးရေးအားလုံးကို ကားမိအောင် အလုပ်အကိုင်၊ အခွင့်အလမ်းတွေ ပေးနိုင်ဖို့ အခက်အခဲတွေ ရှိပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးကိုလည်း တိုးမြှင့်အောင် ဆောင်ရွက်ရမယ်ဖြစ်သလို။ အခြားသော အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်း ဆောင်ရွက်ဖို့၊ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလို ကြည့်တဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကြောင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကို သွားတဲ့ ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများအနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ လူဦးရေးက အခုအချိန်မှာဆို နှစ်သန်းခွဲလောက်ရှိတဲ့ အနေအထား ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အဲဒီလို ရွှေ့ ပြောင်းနေကြတဲ့လူတွေက စီးပွားရေးအပြင်၊ တခြားကိစ္စလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ လုံခြုံရေးပေါ့။ ဝန်ကြီးပြောတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ၊ စီးပွားရေးရှာနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်း၊ နေထိုင်နိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းတွေဆိုတာက တချိန်တုန်းကတော့ နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ်ပိုင်လည်း ပညာသင်ကြားပိုင်ခွင့်လည်း မရှိသလို၊ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ စီးပွားရှာခွင့်လည်း မရှိကြဘူးဆိုတော့။ ဒါကြောင့် အပြင်ဖက်ကို ထွက်ပြေးကြတဲ့ လူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နယ်ခြားဒေသတွေမှာ လုံခြုံရေးအတွက် အခြေအနေတွေ ပိုပြီးကောင်းမွန်လာအောင် အစိုးရအနေနဲ့ ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုလည်း ကျနော်တို့ ကြားသိရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာ BGF လို့ ခေါ်တဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့တွေ။ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ညှိနှိုင်းလုပ်မယ့်ကိစ္စတွေလည်း လုပ်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့ နေရာတွေမှာ အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ ဒါကို ဘယ်လိုများ ဆက်လုပ်ဖို့ ရှိပါသလဲ။
ဦးသိန်းဌေး ။ ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအရကတော့ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တခုတည်း ရှိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေ ဖွဲ့စည်းရေးကတော့ အဓိကရည်မှန်းချက် ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဒီ နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေ ဖွဲ့စည်းဖို့ ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ အလျင်စလိုလုပ်ခြင်းဖြစ်လည်း အခက်အခဲလေးတွေ ရှိနိုင်တဲ့ အနေအထားတွေကို အတွေ့အကြုံတွေအရ တွေ့ရှိရပါတယ်။ တချို့ ဒေသတွေမှာ အဆင်ပြေသလို၊ တချို့ ဒေသတွေမှာ အဆင်ပြေမှု မရှိသေးဘူးဆိုတဲ့ အနေအထားလည်း ပကတိအရှိတရားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ကျနော်တို့ အစိုးရကြားထဲမှာ တည်ရှိတဲ့ ယုံကြည်မှုအပေါ် မူတည်ပြီးမှပဲ ဖွဲ့စည်းသွားလို့ ရမယ့်အနေအထား ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ ဒီနယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့စည်းရေးကို အလျင်စလို မလုပ်ဘဲနဲ့ အခုန နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ယုံကြည်ချက်တည်ဆောက်ပြီးမှ တဖြေးဖြေးချင်းလုပ်သွားဖို့ဆိုပြီး လူကြီးတွေ ဆောင်ရွက်နေတာ ရှိပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဒီ စီမံကိန်းကတော့ ဆက်ရှိနေအုန်းမယ်ပေါ့။ ပုံစံပြောင်းဖို့ ရှိပါသလား။
ဦးသိန်းဌေး ။ ။ သူ့ရဲ့  ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျနော် ပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကတော့ တခုတည်း ရှိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တနေ့မှတော့ ဒီလိုဖြစ်သွားမှသာလျှင် ပိုပြီးတော့ သေချာတဲ့၊ ပိုပြီးတော့ တည်ငြိမ်တဲ့၊ ပိုပြီးတော့ ပြည်သူလူထုအတွက် စိတ်ချရတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဆိုတာ တခုတည်းပဲရှိတဲ့သဘာဝ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ကနေ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီးမှာလည်း ဖယ်ဒရယ်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်တယ်။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိစေကာမူ၊ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကတော့ တခုတည်းပဲရှိတဲ့ဆိုတဲ့ သာဓက က ပေါ်လွှင်နေပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့ နယ်ခြားကိစ္စတွေမှာ အထူးသဖြင့် ပြည်နယ်တွေနဲ့ ပိုပြီးတော့ နီးတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့ ပြည်နယ်တွေရဲ့  လွှတ်တော်တွေ၊ ပြည်နယ်အစိုးရတွေ၊ ပြည်နယ်အဖွဲ့အစည်းတွေ ဘယ်လိုများ အနီးကပ်ဆက်ဆံမှုရှိပါသလဲ။
ဦးသိန်းဌေး ။ ။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေကလည်း အခုသက်တမ်းအားဖြင့် တနှစ်ခွဲလောက်ပဲ ရှိသေးတော့ တော်တော်နုနယ်သေးတယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ရေးရှည်မှာတော့ ပြည်နယ်မှာလည်း လုံခြုံရေးနဲ့ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနဆိုတာ ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုံခြုံရေးနဲ့ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှာ ခန့်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း များသောအားဖြင့် တပ်မတော်သားတွေပဲ ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် နောင်ရေးရှည်ကြတဲ့အခါတော့ ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ ဆက်နွှယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေလည်း ပိုပြီးပြည့်စုံဖြစ်လာမယ့် အနေအထား ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အခုလောလောဆယ် နယ်စပ်ဒေသမှာ လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့၊ တည်ငြိမ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လူပြောများနေတဲ့ အခြေအနေက ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေပါ။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝန်ကြီးအနေနဲ့လည်း ဦးစီးဦးဆောင် လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်း ကျနော်တို့ ကြားသိရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တချို့ သတင်းတွေ၊ အတည်ပြုလို့မရတဲ့ ကြားသိရတဲ့ သတင်းတချို့ မှာဆိုရင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ။ ဘင်္ဂလီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတယ်။ စိမ့်ဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေဟာ – ဒီသတင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝန်ကြီးတို့အနေနဲ့ ဘယ်လိုများ ပြောနိုင်ပါသလဲ။ ဒါတွေက အမှန်လား။
ဦးသိန်းဌေး ။ ။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကတော့ အမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း အစွန်းအဖျားတွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နဲ့ မြန်မာနယ်စပ်အထိ။ နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးအထိ ရောက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်မှာလည်း နယ်နိမိတ်ခြံစည်းရိုး မိုင်ပေါင်း ၁၅၀ ရှိတဲ့အနက် မိုင် ၈၀ လောက် အားလုံးဟာ လုံလုံခြုံခြုံပြီးစီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တခါ ဒီဒေသမှာလည်း တပ်မတော်ရဲ့  ကာကွယ်ရေး အစီအမံတွေ စနစ်တကျ လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီလို လက်နက်တပ်ဖွဲ့တွေ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့ အနေအထားတော့ မရှိဘူးလို့ ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တခါ ရခိုင်ဒေသမှာ ဖြစ်ပွါးတဲ့ ကိစ္စရပ်ကို ကြည့်လိုက်ရင် နံပတ်တစ်ကတော့ လူအုပ်စု နှစ်စုကြားမှာဖြစ်တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုမျှသာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခလည်း မဟုတ်ဘူး။ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာရေးပဋိပက္ခလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အဲဒီတော့ ဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အထူးသဖြင့် အင်တာနက်မှာ ပြန့်နှံနေတဲ့သတင်းတွေ။ အဲဒီ သတင်းတွေဟာ လူမျိုးရေးအရ မုန်းတီးမှုတွေရှိနေတယ်။ ဒါမှမဟုတ် လူမျိုးတခုကိုတခုကနေ နှိမ့်ချတဲ့ ချိုးနှိမ်မှုတွေ ရှိနေတယ်။ တဖတ်ကလည်း လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ ဝင်ပြီးစိမ့်ဝင်ထိုးဖောက်မှုအထိ ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကို ဝန်ကြီးတို့အနေနဲ့ ဒါတွေကို ဘယ်လို တားဆီးနိုင်ဖို့၊ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေသလဲ။ ဒီလိုသတင်းမျိုးတွေ ပြန့်နှံနေတဲ့ ကိစ္စတွေ။
ဦးသိန်းဌေး ။ ။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ရေရှည်မှာတော့ မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့ပဲ တားဆီးမှရမယ့် အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အခုလို ဗွီအိုအေတို့ဘာတို့နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ရှင်းလင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အဲဒီတော့ အခုလောလောဆယ် ရခိုင်ပြည်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေဟာ ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေပြီလို့ ယူဆပါသလား။
ဦးသိန်းဌေး ။ ။ ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိနေပါပြီ။ အဲဒီတော့ အခု အဓိကလိုအပ်ချက်တွေက အခုန နှစ်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့  လက်နက်ကိုင်မပါပါဘူး။ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာတွေ၊ ဆုံးရှုံးသွားတာတွေက ခံစားရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေက အတော်များများ အရည်အတွက်ရှိနေတယ်။ ဒီဒုက္ခသည်တွေကိုသာ သူတို့ရဲ့  ကယ်ဆယ်ရေး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ကျနော်တို့ ဆောင်ရွက်သွားမယ့် အခြေအနေဖြစ်ပြီးတော့ နောင့်နောင်မှာ ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်ရပ်ဆိုးမျိုး မပေါ်ပေါက်စေရေးအတွက် လူမျိုးစု နှစ်ခုကြားထဲမှာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ သဟဇာတဖြစ်ဖြစ် နေထိုင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေ ကျနော်တို့ ရှာကြံပြီးတော့ ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ဝန်ကြီးရဲ့  အခု နယူးရော့ခ် ခရီးစဉ်မှာ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ မေးမြန်းတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေများ ကြုံဆုံဖြေကြားခဲ့ရတာတွေ ရှိပါသလဲ။ တခြား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ရတာတွေ ရှိသလဲ။
ဦးသိန်းဌေး ။ ။ မနေ့က Asia Society နဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ တွေဆုံတဲ့ပွဲမှာလည်း Asia Society ဖက်က ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ဒီကနေ့ ဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အခုန ကျနော် ပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခလည်း မဟုတ်ဘူး။ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခလည်း မဟုတ်ဘူး၊ ဘာသာရေးကိစ္စလည်း မဟုတ်ဘူး။ သို့သော် အခုနလို ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ ပြည်သူလူတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ကြတဲ့အခါကြတော့ သူက လူသားချင်းစာနာတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဒီကနေ့ humanity လို့ခေါ်တဲ့ နောက်တခါ human intervention ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကလည်း ကမ္ဘာက အလေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တော့ human rights နဲ့ကြတော့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ကြတော့ ဆက်နွှယ်လာတဲ့ကိစ္စရပ်တွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း human rights နဲ့ ဆက်နွှယ်ပြီး မေးမြန်းတဲ့အခါမှာ ပြည်သူများရဲ့  ဘဝရေရှည်အာမခံချက် ရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သူတို့ကို ကယ်ဆယ်ခြင်း၊ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနဲ့ သဟဇာတဖြစ်ရေးနဲ့ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေ ကျနော် ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်နဲ့အတူ နယူးရော့ခ်မြို့ တော်ကို ခေတ္တရောက်ရှိနေတဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေးကို ဗွီအိုအေ က ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါ။
Posted: 03 Oct 2012 10:13 PM PDT
Source: စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်သို့ အကြံပြုစာ-အပိုင်း(၁) /ပဋိပက္ခဖြစ်ရသည့် လတ်တလော အကြောင်းရင်းများ
စက်တင်ဘာ၊ ၁၉၊ ၂၀၁၂
ပုဂံရာဇဝင်ကို လေ့လာဆွေးနွေးလိုလျှင် တုတ်ထမ်းပြီး ဆွေးနွေးကြရမည် ဟုအဆိုရှိပါသည်။ ယခု ရရခိုင်ရာဇဝင် ဆွေးနွေးလိုလျှင် ဓားထမ်းဆွေးနွေးရမည့် အခြေအနေရောက်နေသည်ဟု နားလည်မိပါသည်။ သမိုင်းကို မျက်ကွယ် မပြုလိုပါ။ လူကြီးမင်းတို့ ဌာနတွင် သမိုင်းအထောက်အထား အများအပြားရှိနေသည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ ဘက်နှစ်ဖက်ကလည်း သမိုင်းအထောက်အထား အများအပြားကို တင်ပြကြမည်ဟုလည်း ယုံကြည်ပါသည်။
Posted: 03 Oct 2012 11:03 PM PDT